Eksaody 2: 1-15a - Ny Baiboly
Eksaody toko 2, 1-15a
Ny nahaterahan'i Moizy - Ny nandosirany tany Madiana.
1Nisy lehilahy anankiray, fokon'i Levì, lasa naka ho vadiny ny zanakavavin'i Levì anankiray. 2Ary tonga bevohoka ravehivavy dia tera-dahy. Ary hitany fa tsara tarehy ity zaza, ka dia nafeniny telo volana. 3Nony efa tsy azony nafenina intsony dia nalainy ny vata zozoro anankiray, nohosorany mena-tany sy ditin-kazo dia napetrany tao ny zaza, ka nalatsany tao anaty bararata amoron'ny ony. 4Ary ny anabavin'ilay zaza no nijanona teny lavidavitra teny, mba hahita izay hihatra aminy.
5Dia nidina handro eo amin'ny ony ny zanakavavin'i Faraona, ka nitsangantsangana teny amoron'ny ony teny ny zazavavy namany. Rahefa tazany ilay vata tao anaty bararata dia nasainy nalain'ilay ankizivaviny. 6Nosokafany ity izy, ka hitany ilay zaza, zazalahy kely mitomany, dia nangoraka azy izy, ary nanao hoe: Zanaky ny Hebrio itony. 7Tamin'izay kosa ny anabavin'ity zaza dia niteny tamin'ny zanakavavin'i Faraona nanao hoe: Moa tianao va ny handehanako hitady mpitaiza amin'ny vehivavy Hebrio hampinono io zaza io? 8Mandehana, hoy ity zanakavavin'i Faraona. Dia lasa razazavavy naka ny renin'ny zaza. 9Ary hoy ny zanakavavin'i Faraona taminy: Ento ity zaza ity ka tezao ho ahy, fa homeko anao ny karamanao. Dia nentin-dravehivavy ny zaza ka notezainy. 10Nony efa lehibe ny zaza dia nentiny tany amin'ny zanakavavin'i Faraona, ka nataony toy ny zanany, sy nomeny anarana hoe Moizy, fa teo amin'ny rano no nanalako azy, hoy izy.
11Tamin'izany andro izany efa lehibe Moizy, ka nivoaka nankany amin'ny rahalahiny; nahita ny asa mafy nataony izy, ary nisy Ejipsiana anankiray hitany nikapoka Hebrio anankiray tamin'ireo rahalahiny. 12Niherikerika nijery izy aloha, ka nony fantany fa tsy nisy olona teny, dia novonoiny ilay Ejipsiana ka nafeniny tao anaty fasika. 13Ny ampitson'izay indray, nivoaka izy, ka indry fa nifanditra ny Hebrio roa lahy, ary hoy izy tamin'ilay diso hoe: Ahoana no ikapohanao ny namanao? 14Fa hoy ny navalin-dralehilahy: Iza no nanangana an'ialahy ho lehibenay sy mpitsara anay? Sa tadiavin'ialahy hovonoina koa aho, tahaka ny namonoan'ialahy ilay Ejipsiana? Raiki-tahotra Moizy, ka hoy izy: Misy mahalala tokoa ilay zavatra. 15Nony ren'i Faraona ny zavatra nitranga dia notadiaviny hovonoina Moizy, saingy nandositra ny tànan'i Faraona izy, ka nankany amin'ny tany Madiana, dia nipetraka teo anilan'ny lavaka fantsakana. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0050 seconds